आउनुहोस् जानौँ कुन कुन हुन् ती राशि ःमिथुन राशिःयस राशिका मानिस निकै भाग्यमानी मानिन्छन्। यस राशिका व्यक्तिलाई हरेक काममा सफलता मिल्ने गर्छ। अन्य मानिसको भन्दा यस राशिका मानिसलाई दुई गुणा बढी सफलता मिल्ने गर्छ। जन्मसिद्ध भाग्मानी मानिने यी राशिका व्यक्तिलाई सधैँ भाग्यले साथ दिने गर्छ।
सिंह राशिःसिंह राशिका मानिसको दिल निकै ठूलो हुने गर्छ। तर पैसाको मामिलामा भने यिनीहरु थोरै कन्जुस हुने गर्छन्। जसका कारण यिनीहरुले धेरै बचत गर्ने गर्छन् र भविष्यमा हानी कहिलै खेप्नु पर्दैन्। साथै यस राशिका मानिस अरुका सामु झुक्न रुचाउँदैनन्।
कुम्भ राशिःफैसला त जो कोहीले लिने गर्छन्। तर कुम्भ राशिका मानिसले कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा अगाडि आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्ने गर्छन्। कसैले भने सुनेकै भरमा यिनीहरुले काम गर्दैनन्।
निङ्लाशैनी माताको दर्शन गरी हेर्नुहोस्, मिती २०७७ फागुन १९ गते बुधवारको राशिफल !!
तपाईंको पिसाब रोक्ने बानी छ ? निम्तन सक्छ जटिल समस्या !! जानकारीको लागी शेयर गरौं !
प्रहरीले सार्वजनिक गर्यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत भागरथी हत्याको आरोपीत ब्यक्ति !